Home Wararka Dagaal culus oo la isku adeegsanayo hubka culus oo ka socda Baladweyne
Dagaal culus oo la isku adeegsanayo hubka culus oo ka socda Baladweyne
Waxaa magalaada Baladweyne ka socda dagaal khasaaro gaystay xili ay doorasho ay ka socoto Magaaladaasi. Dagaalka ayaa la sheegayaa in uu u dhexeeyo Ciidamada ilaalada ka ah Madaxtooyada Magaalada Baladweyne iyo Ciidamo kale oo malleyshiyaad ah.
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Baladweyne, in Ciidamada Malleyshiyaadka ah ay ka caraysan yihiin kursi ka mid ah Golaha shacabka oo sida la sheegay loo xiray shaqsi. Kursiga Hope010 ayaa la sheegayaa in ay ka dhalatay xiisaddu, waxaana dagaalku uu ka dhacay sida wararka aynu ku helnay afafka hore ee Xarunta looga arrimiyo maamulka Gobolka Hiiraan.
Dagaalka ayaa la sheegayaa in uu ku dhintay hal Askarui, halka labo kalena ay ku dhaawacmeen. Lama xaqiijin khasaaraha kale eek a dhashay dagaalka,waxaana dad goobjoogayaal ah ay inoo sheegeen in dagaalku uu ahaa mid xooggan, oo ay macquul tahay in dagaalku intaa ka khasaro badan yahay.
Previous articleIMF oo Jareysa Kabka Miisaaniyadd ay na Siiyaan Somalia iyo Beentii Beyle oo Baanka Timid.
Next articleMW Deni oo isbeddel ku samaynaya hoggaanka Maxkamadda Ciidamada
K/galbeed oo Wadadii burburka cagta-saartay ka dib Go’aankii Lafta-gareen ee shalay
Waxgaradka Gobolka Sanaag oo ku eedeyay dowlada Soomaaliya in ay dayacday...